Inkomfa ye-15th yamazwe aphesheya ye-gvSIG-usuku 1-iGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Inkomfa ye-15th yamazwe aphesheya ye-gvSIG-usuku 1
Geospatial - GISGvSIGezintsha
INkomfa ye-15 ye-gvSIG yamanye amazwe iqale ngo-Novemba ngo-6, kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo seGeodetic, iCartographic kunye neTopographic Engineering-ETSIGCT. Ukuvulwa komsitho kwenziwa ngabasemagunyeni kwiYunivesithi yasePolytechnic yaseValencia, iGeneralitat Valenciana kunye noMlawuli Jikelele we-gvSIG Association Alvaro Anguix. Ezi ntsuku zidibene nje gvSIG Desktop 2.5, elungele ukukhutshelwa.
NjengeGeofumadas, sigqibe kwelokuba sizimase lo msitho uqobo, ngeentsuku ezintathu, sisazi ukuba yintoni le sigqibo sasimahla, kwaye namhlanje ilinyathelo elizelwe kwimeko yeLppic ngobukhulu bamazwe jikelele.
Ngomhla wokuqala womhla wokuqala weseshoni yokuqala, wayephethe abameli be-Institut Cartografic Valencià - Generalitat Valenciana, i-CNIG - iZiko leLizwe leNkcazelo yeJografi yaseSpain kunye nobuntu bukaRhulumente wase-Uruguay, oveze i-IDE yase-Uruguay yenziwe kwi-gvSIG kwi-Intanethi.
Emva koko, iseshini yesibini yaqhubeka, apho bekuya kuxoxwa nge-IDE's. Ngesi sihlandlo abameli beZiko le-European Thematic kwiYunivesithi yaseMalaga bebekhona nezifundo zabo zetyala IPANACEA I-Bi Biodiversity. Emva koko, uRaúl Rodríguez de Tresca - i-IDB yathatha umgangatho, yazisa uyilo Indawo yolawulo lwendlela kwiDominican Republic, ukuvelisa itekhnoloji yenkxaso kulawulo lweempahla zendlela kunye neebhlorho. Ukongeza, uRodriguez uthe ukubaluleka komsebenzi wakhe kukuba abantu abaninzi banolwazi lwendawo,
"Into esiyifikileyo kukuvulwa kweengqondo, ngoku kukho abantu abaqhelekileyo abanxulunyaniswa neeprojekthi ezifuna ukubandakanywa kwabo ukufikelela kumaqonga kunye nokuvelisa nokulawula idatha."
Kolu bhlulo lubanayo, URamón Sánchez de Sans2 Innovación Sostenible SL, ubonisile Ukusetyenziswa kwe-gvSIG kugxile kulawulo lweziboneleloOko kukuthi, indlela yokudibanisa inkqubo yokujonga kunye ukuyidibanisa ne-GvSIG GIS yasimahla, ukukhuthaza ulawulo lwezibonelelo kunye neempendulo ezisebenzayo ngexesha lomsitho.
Ibhlokhi yesithathu yemini enxulumene nokudityaniswa, eqhutywa nguJoaquín del Cerro, omele umbutho we-gvSIG, wazisa uphuculo kunye nohlaziyo lwenkqubo Ulawulo lwengozi kunye nokudityaniswa kunye ne-ARENA2 yoLawulo Jikelele lweTrafikhi kwi-gvSIG Desktop. UOscar Vegas kwelinye icala, wazisa Ukucwangciswa kwamacandelo obonelelo ngeendlela zoncedo lwamanzi kwi-gvSIG ngoncedo lweConvertGISEpanet kunye nezixhobo ze-RunEpanetGIS, ezizixhobo zokwenza imodeli ye-hydraulic yothungelwano lwamanzi, yenziwa yabonakala indlela yokudlulisela ulwazi kwi-GIS, kunye nokulula kokuguqulwa kwefayile kunye nokuhanjiswa kwedatha.
Siyaqhubeka ngenkcazo-ntetho yokugqibela ye-4to block ngokuboniswa kukaIván Lozano de Vinfo VAL, oboniswe njengeVinfoPol, aphucula zonke iinkqubo ezinxulumene nendawo yamapolisa, ukusuka kwiindawo, ukufunyanwa kweeprofayili zolwaphulo-mthetho, ubukho bezohlwayo phakathi kwabanye. Esi sixhobo simiselwe njengesikrini, apho ungalawula khona zonke izehlo zendawo yamapolisa, "sidala ulawulo olugcweleyo lokulawula inkqubo yonke apho amapolisa asebenza kwinkqubo enye."
Okokugqibela, sifika esiphelweni seeseshini kunye nomxholo weSoftware yezixhobo. Kweli candelo, amabali empumelelo aqhutywa ngezixhobo eziziimobhayili aziswa, umzekelo, uNjineli uSandra Hernández ovela kwiDyunivesithi yase-Autonomous kwiLizwe laseMexico, wabonakalisa ulwazi kwi Umbutho kunye nokuqokelelwa kweenkcukacha ebaleni kusetyenziswa usetyenziso lwefowuni kunye nezixhobo, kuhlolo lokuhamba kwiZiko leMbali laseToluca. Ngale projekthi, ababekho babekwazi ukubona umsebenzi we-field owenziwa ngesicelo se-gvSIG, esisimahla kwaye sisebenza ngaphandle kweintanethi ngaphandle kokuxhuma kwi-Wi-Fi okanye inethiwekhi yedatha, lonke olu lwazi oluqokelelweyo kamva luya kuphononongwa kwaye luhlalutywe kwi-gvSIG Desktop, ukuvelisa iingxelo zokuhamba okuzinze kubemi baseToluca nakwiziseko zophuhliso abanazo.
Umbutho we-gvSIG ukhuthaza ukubandakanywa kwinkomfa kungagcini nje kwimibutho okanye iinkampani ezinkulu, kodwa kukwenze kwabonakala nomsebenzi omnye wabafundi bayo, Glene Clavicillas neprojekthi yakhe. Ukwenza ikhathuni yezolimo ngohlalutyo oluninzi lweemifanekiso zesatellite kunye necadastral cartography.
Ixesha lokuphumla liye laqhubeka kunye neworkshop, apho uninzi lwazisayina simahla. Iworkshop ibandakanya izihloko ezinje nge-gvSIG yabaqalayo, uhlalutyo lwedatha nge-gvSIG okanye i-ConvertGISEpanet - RunEpanetGIS-gvSIG kunyango lolwazi kuthungelwano lwamanzi.
Ukuba linyathelo elinye kude neValencia, kusekho iintsuku ezimbini; apho sinethemba lokugubungela udliwanondlebe nabadlali abaphambili abaya kuthi basinike umbono wabo apho bacinga ukuba i-gvSIG izakuya khona kwiminyaka elandelayo.
Imagazini yeGeo-Engineering & TwinGeo-uHlelo lweSibini
INkomfa ye-15 yeHlabathi ye-gvSIG-uSuku lwesi-2
Udliwano-ndlebe noJack Dangermond